Yakashambidzika Dhizaini, Yekuchenesa Sevhisi, Yakachena Zvigadzirwa- Airwoods
Kupisa Kudzorera Ventilator
Mapurojekiti Nyaya Yekudzidza
AIRWOODS inotungamira pasi rese mupi wezvigadzirwa zvemagetsi zvine simba, kupisa uye kutonhodza mweya (HVAC) zvigadzirwa uye mhinduro dzakazara dzeHVAC kumisika yekutengesa neyemaindasitiri. Kuzvipira kwedu ndekwe kupa vatengi vedu mhando dzepamusoro dzemhando yepamusoro uye zvigadzirwa pamitengo inodhura.
Ipa masevhisi ekubvunza uye mazano, kusarudzwa kwechigadzirwa uye dhizaini dhizaini zvinoenderana nemapurojekiti
Ipa ruzivo rwehunyanzvi kubatsira vatengi zvirinani kugadzirisa yavo sisitimu, kudzikisira kukanganisa uye kuwedzera nguva yemuchina webasa.
Imba yekuchenesa kana yakachena kamuri inowanzo shandiswa sechikamu chehunyanzvi hwekugadzira maindasitiri kana kutsvagisa kwesainzi, kusanganisira kugadzirwa kwezvinhu zvemishonga uye microprocessors.
Kana zvasvika pakudzidza, nguva zhinji tinoreva kuchikoro uko vese vadzidzi ...
Ongorora nzvimbo yevhidhiyo yekuratidzira kweprojekti uye zviwanikwa zvedzidzo.
Muromo Girazi Wool Sandwich Panels
Vertical Type Heat Pump Energy Kupisa Kudzoreredza Ve ...
Zvita 22, 2020
Chii chinonzi Fan Filter Unit? Iyo fan fan ficha kana FFU yakakosha laminar kuyerera diffuser ine yakasanganiswa fan uye mota. Iyo fan uye mota zviripo kuti vakunde iyo inomira kumanikidza kweiyo yepakati yakaiswa HEPA kana ULPA firita. Izvi zvinobatsira ...
Mbudzi 15, 2020
Gumiguru 28, 2020
Kurongedza uye kurodha mumudziyo mushe ndiyo kiyi yekuendesa iko kuendesa muchimiro chakanaka kana mutengi wedu agamuchira kune rimwe divi. Kune aya mapurojekiti ekushambidzika eBangladeshi, maneja weprojekti wedu Jonny Shi akagara panzvimbo yekuchengetedza uye kubatsira kuita kwese kurodha. Iye ...
Kubva 2007, Airwoods yakatsaurirwa kupa yakazara hvac, yakachena imba uye VOC kurapwa mhinduro kumaindasitiri akasiyana. Isu tinovavarira kuendesa yakanaka yekuvaka yemhando yepamusoro kune pasirese nemagetsi anoshanda zvigadzirwa, mhinduro dzakagadziriswa, mitengo inodhura uye nemasevhisi makuru.